Soo dejisan Wikipedia 2.7 – Vessoft
Wikipedia – software in uu akhriyo macluumaadka encyclopedia weyn ee adduunka ee Wikipedia. Software The kuu ogolaanayaa inaad si aad u eegto articles cusub, bogagga badbaadisay, taariikhda dhirta iyo u aragto calaamadaha kuugu dhow. Wikipedia u ogolaanaya in ay akhriyaan articles oo ku qoran luqado kala duwan, ku kaydi bog, baadhaan bogga, bedesho font ah, theme iwm software ayaa u saamaxaaya in ay wadaagaan macluumaadka via codsiyada kala duwan ama wireless xiriir. Wikipedia ogolaanaya in la ballaariyo goobaha iyo saxiixa in la xisaabtaada.
Reading Easy of encyclopedia caan
Kartida aad u akhrin maqaalada ku qoran luqado kala duwan
Keydsan bogagga iyo dhirta taariikhda
Awoodda in ay wadaagaan macluumaadka by codsiyada kala duwan
Soo dejisan Wikipedia
Faallo ku saabsan Wikipedia
Wikipedia Xirfadaha la xiriira